Istaraatiijiyad Suuq-geynta Mawduuca B2B oo Loo Baahan Yahay Awood | Martech Zone
Istaraatiijiyad Suuq-geynta Mawduuca B2B ee Loogu Baahan Yahay Awood
Jimco, Oktoobar 9, 2015 Jimco, Oktoobar 9, 2015 Douglas Karr
Suuqyayaashu badanaa waxay la halgamayaan kaliya inay la socdaan baahiyaha ka kooban waxyaabaha ay ka kooban yihiin iyo emaylka barnaamijyada suuqgeynta. Badanaa maahan, xeeladaha macaamiisheena waxaa lagu dhisay hababkooda gudaha. Wararka, sii deynta wax soo saarka, cusbooneysiinta adeegga ama xitaa jadwalka toddobaadlaha ah ayaa tilmaamaya waxyaabaha la daabacay.
Dhibaatada, dabcan, waa in qorshahaaga suuq-geynta ganacsiga uusan raacin jadwalka safarkaaga rajadaada. Ganacsi mustaqbal ayaa laga yaabaa inuu raadinayo macluumaad aad bixin karto maalin kasta oo sanadka ah, ama laga yaabee xilli ahaan, ama wareeg miisaaniyadeed. Waqtigu waa mid ka mid ah ballanqaadyada kobcinta iyo suuq geynta nidaamyada otomatiga - bixinta waxyaalaha jiidaya ama ku riixaya ganacsiga dhanka beddel ku saleysan ay jadwalka.
Laakiin otomatiggu wali ma ahan cillad la'aan. Shirkado badan ayaa falanqeeya oo isu geeya xogta macmiilka si ay ula yimaadaan isbadal meertada nolosha. Xaqiiqda, dabcan, waxay tahay in ganacsi kastaa ku shaqeeyo jadwalkooda - riix aad u adag oo dhaqso badan waadna lumisay rajadii. Si tartiib tartiib ah u jiid oo qofka kula tartamaya ayaa laga yaabaa inuu helo iibka.
Waxaa jira cabirro badan oo xagga horumarinta ah. Badanaa maahan, ganacsiyada waxay ka shaqeeyaan wax soo saar. Tusaale ahaan waxay noqon kartaa soo saarista qoraal maalinle ah, joornaal toddobaadle ah, macluumaad bille ah iyo warqad saddex-biloodle ah. Laakiin waxsoosaarku mahelayo ganacsi meeshuu ubaahanyahay inuu joogo. Jiritaanku wuxuu ku hayaa waxyaabaha saxda ah meesha saxda ah marka rajadu raadineyso.
Marka, ganacsatadu waxay horumariyaan jadwalka taariikhda ee adag, geeddi-socodka gudaha, iyo jadwalka dallacsiinta iyo ololayaasha xiriirka dadweynaha si loo xaqiijiyo guusha Teknolojiyadaha otomaatiga cusub ayaa adeegsanaya tikniyoolajiyada barashada mashiinka si ay ugu fiicnaato isgaarsiinta himilooyinka isla markaana ay ugu sii gudubto beddelidda xawaare ku tiirsan macmiilka.
Wali kuma filna.
Dhibaatada, dabcan, waa in tartame kasta oo karti leh uu u shaqeynayo isla xagal isla markaana laga yaabo inuu xitaa hirgeliyo tikniyoolajiyad la mid ah. Si fudud kuma filna in la sii wado soo saarista waxyaabaha ku jira wareeg aan dhammaad lahayn, oo soo noqnoqda. Ka wareejinta hoggaanka ganacsiga laga soo bilaabo rajada suuq geynta iyo hoggaanka u qalma waxay u baahan tahay awood. U wareejinta hoggaan u qalma iibka waxay u baahan tahay kalsooni.
Markay ganacsatadu xal raadinayaan, waxay ka raadiyaan an xujo. Ganacsiyadu waxay rabaan inay yareeyaan khatarta, sidaa darteed waxay u muuqdaan inay wax ka iibsadaan iibiyeyaasha iyo xalalka maamulka warshadaha.
Awoodda badanaa waa la iska indho tiraa inkasta oo ay fure u tahay istiraatiijiyad suuqgeynta waxyaabaha guuleysta. Tweet Tani!
Shirkadaha qaarkood waxay codsadaan caawimaadda saamileyaasha horeyba awood ugu lahaa warshadaha la siiyay inay ku horumariyaan kooda. Waxaan aragnay natiijooyin isku dhafan oo istiraatiijiyaddan ah tan iyo saamaynta inta badan runti waa cadaalad caan online.
Habka ugu wax ku oolka badan ee lagu gaari karo maamulka maahan inaad bixiso; waa inaad adigu dhisto. Tweet Tani!
Ku dhisida hay'ad leh nuxurku ma aha horumarinta aaladda cusub. Waxay ku saabsan tahay xisaabinta qayb kasta oo ka mid ah waxyaabaha aad horey u haysatay oo aad ku wanaajiso. Waxay ku saabsan tahay ka saarida waxyaabaha xadiidka ah ee aan wadin wax horseed ah ama rajada hoos u dhigaysa meertada nolosha.
Qiyaasta awoodda, ma jiro nidaam ka fiican kan Google. Algorithms-ka Google wuxuu u xuubsiibtay sannadihii la soo dhaafay inay diiradda saaraan ku-xirnaanta iyo xiriirka ka dhexeeya dadka, ganacsiyada, goobaha, magacyada wax soo saarka, iyo xitaa dadka ku dhex jira hay'adaha. Haddii aad la yaabban tahay in shirkaddaadu ay tahay maamul iyo in kale, waa inaad baaris ku sameysaa halka aad ku kala sarreysid mowduucyada la xiriira rajooyinka laga qabo baaritaanka khadka tooska ah.
Si aad si fiican ugu kala sareysid natiijooyinka mashiinka raadinta, waa inaad abuurtaa waxyaabo aan caadi aheyn. Marka la isku daro ereyga muhiimka ah, taasi waxay u baahan tahay inaad barato taas oo ku guuleysaneysa raadinta oo aad qabato shaqo aad u qoto dheer. Waxaan aqoonsaneynaa mowduucyada ay tartamayaashu ku kala sarreeyaan si ka wanaagsan sida aan nahay, waxaan ku horumarineynaa waxyaabo kafiican adeegsiga qoraalka, sawirada, iyo fiidiyaha… waxaanna cusbooneysiineynaa waxyaabaha aan horey u haysanay ee aan si fiican u qiimeyn.
Dadaalladeennu waxay ka wareegeen 100% wax soo saar cusub oo cusub hadda illaa qiyaas ahaan 50% cusub iyo 50% wanaajinta waxyaabaha hadda jira. Istaraatiijiyadyadayada ka kooban mawduucyada ayaa ka fogaaday inay had iyo jeer soo saaraan maqaallo cusub, sawirro, iyo fiidiyoow. Hadda waxaan hagaajineynaa waxyaabahayaga hadda jira, dib u daabac cusub sida (isla URL-ka) oo aan u kobcinno bulsho ahaan. Waxaan sidoo kale ku darnaa istiraatiijiyad lacag bixin ah si aan u weyneyno gaaritaankeeda.
Sababtoo ah waa tan ugu fiican nuxur ahaan, si ka wanaagsan ayay u darajayn doontaa. Natiijooyinka waa kuwo naxdin leh. Boqollaal boqol oo mowduucyo muhiim ah oo aan ka shaqeynay, waxaan ka soo dhaqaaqnay celcelis ahaan darajada 11 oo waxaan u gudubnay celcelis ahaan darajada 3. Beddelkeennu wuxuu ka sarreeyaa 270% helitaanka hoggaanka. Qiimahayagii macdanta 'lead' ayaa hoos u dhacaysa iyadoo tayada liidhkeenna ay soo hagaageyso.
Qoraalkii ugu dambeeyay ee arrintan ku saabsan. Awooddu waxay u timaadaa dadka si ka fudud shirkadaha ganacsiga, markaa waa inaad dibedda u dhigtaa hoggaamiyeyaashaada. Apple waa summad aad u weyn, laakiin awoodda ganacsigu maaha bilaa magacyo sida Steve Jobs, Jonathon Ives, Tim Cook, Steve Wozniak, Guy Kawasaki, iwm.
Waxaad dadkaaga siisaa fursad ay ku noqdaan shakhsiyaad awood leh waxaadna dardar gelin kartaa awooda ganacsigaaga. Markaad aragto hogaamiyaashaada oo kahadlaya munaasabadaha iyo shirarka waxay ganacsigaaga hor dhigeysaa dhagaystayaasha labadaba khuseeya isla markaana waqtigooda ku habboon. Xiriirka shaqsiyeed wuxuu yareynayaa waqtiga loo baahan yahay si loo xiro iibka maadaama aad awoodo inaad muujiso awoodaada isla markaana aad isla markaas hesho kalsoonida rajada.
Tags: xujob2bmaamulka b2bbadalida b2bmaamulka nuxurkaGuy KawasakiJonathon Ivesshaqooyinka steveSteve WozniakTim Cook
Barnaamijyada Mobilada: Sidee Muhiim u tahay Qorshaynta, Qaabeynta, iyo Tijaabadu?